Odokothela beMedicins Sans Frontieres Baqhuba Umhlangano oweAfrica
Odokotela abasebenza bezimele ngaphansi kwenhlanganiso ye Medicins Sans Frontieres – MSF, baqoqe umhlangano wakuqala ophathelane lezwekazi le Africa eZimbabwe, ukubonisana phezu kokungenziwa ukuthuthukisa imisebenzi yabo ekuphathiseni uzulu emikhuhlaneni etshiyeneyo.
Emhlanganweni owenzelwe e-Oasis Cresta Lodge eHarare ngoLwesine ekuseni, igcwethi kwezempilakahle ziveze ukuba zisesekhona izikhexe ekusebenzeni kwabodokotela emizameni yokulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo emazweni womhlaba okubalisa eleZimbabwe.
Lezi ngezibalisa ukusilela kolwazi kuzigulane labasizayo okufana labongi, ukusilela kwendlela zokulungiselela ukulwisana lemikhuhlane kanye lemali yokufeza limisebenzi.
Imikhuhlane ekade isesiqongweni ihluzwa kulumhlangano ngebalisa ukusabalala kokuthelelanwa kwegciwane lomkhuhlane wengculaza, owofuba, owe Ebola kanye okuphathelene lokudlwengulwa kwabantu.
Umnumzana Velibanti Dlamini wakwele Swaziland, ngomunye wabacubunguli abaze kulomhlangano. UDlamini oqhube uhlelo lokudingisisa phezu kokungenziwa ukuqeda inkinga abezempilakahle abahlangana phezu kokuqedwa kodubo lokusabalala kwegciwane kanye lokwehlisa inani lababulawa ngumkhuhlane wengculaza.
Unkosikazi Nompumelelo Mantangane ungumongikazi emsebenzini wokuphathisa abantwana kanye labasakhulayo, enhlelweni zokuvimba ukuthelelanwa kwezigcikwane lengculaza emzini we Khayelitsha, e Cape Town kwele South Africa. Inhlosiso ayenze labanye bakhe, uthi iveza ubunzima obukhona ekusebenzeni labantwana abaphila legciwane loba sebebulawa ngumkhuhlane wengculaza.
Kuvunyelenwe kulomhlangano ongenwe zingcwethi kwezempilakahle ezivelele emazweni atshiyeneyo, ukuba kumqoka ukuqiniswa kobudlelwano phakathi kwe MSF labohulumende lapho esebenzela khona, okubalisa eleZimbabwe, ithuthukiswe imisebenzi yokulondoloza impilakahle kazulu.
Ngasikhathi sinye uhulumende uthi seluphelile udubo lokukhalala imisebenzi kwabongi ngoba eseyitholile imali yokubahlawula lapho besebenze ebusuku.
Umgcinisihlalo we Health Services Board umnumzana Lovemore Mbengeranwa utsho lokhu ngesikhathi intatheliozindaba zifuna ukwazi phezu kwesimo sabongi ngemva kwakhe lumhlangano okusemthethweni emele umphathintambo wezempilakahle.
UMbengeranwa ulandule imbiko ethi zikhona iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle, ezikade zitshaphaza imali obekumele isebenze ukuhlawula abongi nxa besebenze ebusuku.